नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : देश कुल्चेर विदेशलाई परमेश्वर मान्नु राजनीति होइन !
देश कुल्चेर विदेशलाई परमेश्वर मान्नु राजनीति होइन !
नया“ भनेको 'इम्परर न्यू क्लोथ'को बादशाह हुनु होइन । नया“ भनेको जनताको सन्तुष्टी खोज्नु, जनमतको संवोधन र सम्मान गर्नु हो । त्यस्तो सम्मान आर्जन गर्न नसकेका 'लोकतान्त्रिक राजनीतिका अजर्ुृनहरु' असफल भए, असफलतालाई सफलताको भ्रमजाल खडा गरेर हाम्रा नेताहरु शासनमा छन्, आसनमा छन् र भाषणमा छन् । यस्तो अकर्मण्य राजनीतिले देशको अस्तित्वलाई कतिञ्जेल धान्न सक्लान्
राजनीतिक खम्बाहरु अनेक अनुहार, एक चरित्रका छन् । शेषनागका जस्ता हजार ज्रि्रा निकाल्छन् र मौका हेरी-हेरी ज्रि्राअनुसारका कुरा गर्छन् । जनतन्त्र ल्याउ“छु भनेर बन्दुक बोक्ने बमबहादुर संसद हु“दै सरकारमा पुग्यो र सडकबाट फुइ“की हा“क्दैछ । यसले बिस्फोटक बम बिसाए पनि बिस्फोटक भाषणबम हान्न छोडेको छैन । यिनको यिनको तातो बोली बीसको उन्नाइस पनि सेलाएको छैन । समाजवाद र लोकतन्त्र बलियो पार्छर्ुुन्ने खेमा पनि छ, यो कित्ता बिदेशीको खैरा“त खाएर डकार्दै छ । राष्ट्रिय मनस्थिति र एकतामा यिनीहरु सकेजति अमिलो निचोरेर फटाउ“दैछन् । मानौ यिनीहरु नेपाली अनुहारका विदेशी प्रतिनिधि हुन् । देशमा दल जिन्दावाद भयो, जनता जिन्दावाद हुन
मुसोलिनी माष्टर थिए । जनता निरीह र देश कमजोर बन्दै गएको देखेपछि उनीभित्र ब्रि्रोहको ज्वाला दन्कियो । यही ब्रि्रोहको क्रममा एकदिन उनको हिटलरस“ग भेट भयो । एउटा सिक्का थियो, एक कप चिया किनेर आधा-आधा पिएपछि दुबैले ब्रि्रोहको अठोट गरे । पूलमुनी फालेको चिसो कागजलाई सुकाउ“थे र फासिज्मको नारा लेखेर बा“ड्थे दुवैजना । यसरी फासिज्म जन्माए । जर्मन राष्ट्रबादका लागि दुवैले ब्रि्रोह गरे, कलम र हतियार उठाए, जनतालाई जगाए । उनीहरुले ब्रि्रोही सेना गठन गरे । विजयी भए तर, उनीहरुले जर्मन राष्ट्रिय आर्मी गठन गरेपछि मुक्ति सेनाको अस्तित्व रहन दिएनन् ।
बृटिस साम्राज्यको जुत्तामुनी किचिएका अमेरिकनहरुले आफूमाथि अनावश्यक कर लादिएपछि त्यसको बिरोधमा 'वार अफ इण्डिपेन्डेन्ट' घोषणा गरे । यसका नायक थिए ः जर्ज वाशिङ्टन । शान्त स्वभावका वाशिङ्गटनले जनक्रान्ति गरे । उनले पनि हतियार उठाए र देशलाई स्वतन्त्रमात्र पारेनन्, अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपतिसमेत बने । क्रान्तिकालमा उनले पनि लडाकु दस्ता गठन गरेका थिए । जब राष्ट्रिय आर्मी गठन भयो, ब्रि्रोही सेनाको अस्तित्वलाई कायम हुन दिएनन् । दलीय स्वार्थभन्दा देशको र्सार्वभौमिकतालाई महत्व दिनेहरुको चम्किलो र सुन्दर इतिहास हो यो ।
भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ूव अङ्ग्रेजविरुद्ध लड्नका लागि बा“दर सेना गठन भएको थियो । अधिकांश नावालिगहरु रहेको यो सेनाको सदस्य इन्दिरा गान्धीसमेत थिइन । भारतलाई स्वतन्त्र गराउ“दा बा“दर सेनाले नपत्याउ“दो गरी सन्देश प्रवाहको साह्रै ठूलो भूमिका निभाएको थियो । जुन अरु तरिकाबाट अङ्ग्रेजको कडा शासनकालमा सम्भव नै थिएन । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बा“दर सेनाको अस्तित्व रहेन । 'मेरा भारत महान' भन्ने भारतीयहरु बा“दर सेनाको इतिहास पढ्छन् र प्रशंसा गर्छन् ।
नेपालमा पनि ००७ साल अघि राणाविरुद्ध मुक्ति सेना थियो । रङ्गविक्रम राणा पक्षमा र पहलसिंह व्रि्रोही खेमामा उभिएका थिए । २००८ सालपछि यी ब्रि्रोही मुक्तिसेना, लैनछोकडाहरुलाई सेना र प्रहरी फोर्समा समायोजन गरियो । समायोजनपछि मुक्तिसेनाले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्‍यो । पहलसिंह लामा मुक्ति सेनाकै लैनछोकडा थिए । ०१५ सालमा वीपी प्रधानमन्त्री हु“दा कांग्रेस मुक्ति सेनाको ४ सय हतियार इजरायल र वर्माको नेविन सरकारले समेत लग्यो । वीपी र राजा महेन्द्रवीचको मनमुटावको कारण यो पनि एउटा थियो । मुक्ति सेनाको हतियार नेपाल पुलिसले पनि चलायो ।
चीनमा १९४५ देखि १९७६ सम्मको अवधि माओयुग हो । कम्युनिष्ट बिचारका लागि आज पनि माओ देवदूतभन्दा कम पूज्य छैनन् । उनका रेड आर्मीले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको हो । आधार इलाका र क्रान्तिमा ट्याक्टिकल इक्विलिव्रियम उनकै मानसिक उपज थियो । आज माओ म्यूजियमको सजावटसहितको गर्बपर्ूण्ा पोट्रेटमा छन् । रेड आर्मी राष्ट्रिय आर्मी बनिसकेको छ । बेलायतका ३ नेपाली मध्येका एक प्रोफेसर कुलबहादुर लुइटेलका अनुसार 'बेलायती नजरमा कम्युनिज्म विश्वमा असफलशिद्ध राजनैतिक व्यवस्था हो ।' -२०६६ भदौ १९ को नेपालीपत्र) । आज पा“चतारे लाल चीनमा खुला अर्थनीति छ । चीन अमेरिकामा भन्दा बढी डलरको संचिति गर्छ । ३२ हजार मन्टिनेशनल कम्पनी चलेका छन् चीनमा । विश्वको ९० प्रतिशत बजारमा चीनका उत्पादन पुगेका छन् । आगामी २० वर्षा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ । चीनमा माओ छन्, माओवाद छैन । चीनमा राष्ट्रवाद बलियो छ, त्यसैले प्रगति छ । बिपन्न नेपाल १९६० दशकको माओवादको उर्बरा भूमिमा सिमित छ ।
रेडबुकलाई मन्त्र बनाएको दलले साठीको दशकको माओको प्रेत जगाएर नेपालको राजनीतिक रुपरङ्गै बदलिदियो । २४० वर्षन्दा लामो इतिहास फेरिदियो । लोकतन्त्रको बिडा उठाएको छु भन्ने शक्तिहरुलाई पछाडि धकेलिदियो । छापामार शैलीको उन्माद, चर्को आलोचनाको जनबाढी ल्याएर राम्रा नराम्रा धेरै कुरा बगाइदियो । त्यसपछि परिवर्तन र समयको सुइरोमा रोपिएर माओवाद जनचाल्नोमा चालिदैछ । जतिसुकै आत्मबल पर््रदर्शन गरे पनि जनता इमान्दारिता नदेखेसम्म विश्वस्त हु“दैनन् । राजनीतिक दलका लागि जनता प्रेरणाका शक्ति बन्नर्ुपर्छ । बन्दूकले तर्सर्ाा सकिन्छ, मान्छेको मन जित्न सकिन्न । राजनीतिक माहोल देखाउन सैन्य बल काम लागे पनि राजनीतिक मोर्चाको निर्ण्ाायक मोडमा जनर्समर्थन नै चाहिन्छ । पुरानाले जनविश्वास गुमाए, यही परीक्षामा छ, यो नया“ शक्ति ।
विज्ञहरुका अनुसार राज्यलाई विश्वास गर्न नसक्नेले कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैन । सबैभन्दा ठूलो रोग अहंकार हो, यसलाई गाजल पुछेझैं पुछ्नर्ैपर्छ । अन्यथा यही रोग क्रोनिक बन्छ र आज देखिएको फलामे बार भोली खिया लागेर झरिसकेको हुनेछ ।
फेरि पनि भनौं, नेपालको इतिहास हर्ेर्ने हो भने व्रि्रोही सेनाको र्सजक नेपाली कांग्रेस नै हो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा प्रवासबाट लैनछोकडा ल्यायो, तिनका का“धमा बन्दूक भिराएर मुक्ति सेनाको नामबाट व्रि्रोह गरेको थियो । राणाको पुलीस राम दल र कांग्रेसको मुक्ति सेना मिलाएर नेपाल प्रहरी गठन गरिएको हो । त्यसपछि सत्य, सेवा, सुरक्षा बोक्ने नेपाल प्रहरी बन्यो । त्यो नेपाल प्रहरी पहलसिंह लामाको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । अर्थात्, नेपाल प्रहरीको जग ब्रि्रोही र राज्य डफ्फाबाटै सुरु भएको हो । पहलसिंह लामालाई पछि राजदूत पनि बनाइयो ।
कांग्रेसले झैं माओवादीले जनमुक्ति सेना र वाईसीएल गठन गरेर आफ्नो बर्चस्व कायम गरिछाड्यो । कांग्रेसको मुक्ति सेनाको स्केल सानो थियो, माओवादीको सेना र वाईसीएलको जमात ठूलो छ । यो सुरक्षा समितिमा समेत बिस्तार हुनपुगेको छ । इतिहासका अनुसार केही मुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा मिलाउने काम पनि भयो । ब्रि्रोहीलाई राजा महेन्द्र र वीेरेन्द्रले सेना र प्रहरीबाट २-२ जना एडीसी लिने दरवन्दी बढाएर दरवारिया दीक्षान्त ब्रतबन्ध पनि गरिएको दृष्टान्त छ । माओवादी त्यही धङ्-धङ्े पालेर आफ्ना युध्दकालीन जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनको माग गरिरहेको छ । जनमुक्ति सेना नेपाली हुन्, तिनलाई उचित स्थान दिनु राज्यको कर्तव्य हो । तिनीहरुको व्यवस्थापन नभई शान्ति प्रकृया तार्किक निष्कर्षा पुग्दैन, यो पनि सत्य हो । ब्रि्रोहीको सामाजिकीकरण हुनर्ैपर्छ तर राजनीतिभित्रको राजनीति लखनौंको भुलभुलैयाजस्तो भुलाउने खालको छ ।
आदर्श र नैतिकताको तराजुमा जोखिन नसक्ने नेताहरु उनीहरुको व्यवहारले नै भुत्ते बन्न थालेका छन् । क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादीहरु नर्वे वा चीनको शपथग्रहण र कार्यशैली अपनाउन सक्दैनन् । स“धै नया“ गरु“, नया“ बनु“ भन्ने नेताहरु भ्रष्टाचारको पोखरीमा नाङ्गै डुबुल्की मार्न पुग्छन् । यसका अनेक दृष्टान्तहरु देखिइसकेका छन् । जनताको सम्मान गर्न नसक्ने नेताहरु महिषपुजनदेखि कमलनयनाचार्य, कालिबाबा, चन्द्रास्वामी, दीनवन्धु पोखरेलसम्मका गुरुचरण र्स्पर्शको स्तरसम्म झरिसकेका छन् । संस्कृति, पुरातत्व र इतिहास मास्नेहरु शप्ताहदेखि महायज्ञसम्मको आराधना पनि देख्न थालिएको छ । प्रचण्डजस्ता नेता महिष पुजनमा लागेको देख्दा धेरैले आर्श्चर्य व्यक्त गरे । लोकराज्यमा रोमको भ्यालेन्टाइन दिवस -प्रणय) धुमधामले मनाउने परम्परा बसिसक्यो । चर्चा छ- योनी दिवसको ।
र् कर्तव्य पुरा गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्टिल र इस्पात बन्नुपर्ने नेताहरु सिमलको भूवाजस्तो हलुका भएका छन् । नेताले जनतालाई झुक्याएका सर्न्दर्भमा दार्शनिक नित्सेको एउटा भनाई सम्झनु उपयुक्त होला- 'म तिमीले ढा“ट्यौं भन्नेमा निराश छैन । अब तिमीमाथि विश्वास गर्न नसक्ने भएकोमा म निराश छु ।' यी सबै प्रसङ्गका सर्न्दर्भमा एकै बाक्यमा भनौं- बा“च्नका लागि खाने कि खानका लागि बा“च्ने - देश कुल्चेर विदेशलाई परमेश्वर मान्नु राजनीति होइन, मुखुण्डो खोलेर नेपाली अनुहार देखाऔं, त्यो राजनीति हो । त्यही राजनीतिलाई जनतामा भिजाऔं, जनताका लागि र्समर्पण होऔं । र, बुझौं- नया“ नेपाल भनेको 'इम्परर न्यू क्लोथ'का बादशाह हुनु होइन ।